‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन’को मस्यौदा संसद्मा : असोज २ भित्र पास हुनैपर्ने | गृहपृष्ठ
Home समाचार ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन’को मस्यौदा संसद्मा : असोज २ भित्र पास हुनैपर्ने
on: १५ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०८:३४ समाचार
‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन’को मस्यौदा संसद्मा : असोज २ भित्र पास हुनैपर्ने
काठमाडौं । संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । साथै यसको कार्यान्वयनको लागि ३ वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनी संविधानले नै समयसीमा पनि निर्धारण गरेको छ । निर्धारित मिति (आगामी असोज २ गते)भित्रै ऐन लागू गर्ने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ ।
‘रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन’को मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसद्मा दर्तासमेत भइसकेको मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार यही महीनाभित्र ऐन पास हुनेछ । ऐनको मस्यौदामा बेरोजगार को हो भन्ने परिभाषित गर्नुका साथै बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सरकारले के–के व्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै रोजगारी दिन सकेन भने के गर्ने, आफैले कति रोजगारी दिने र बाहिर रोजगारी पाउन वा स्वरोजगार हुन के गर्नेजस्ता कुरा ऐनमा समेटिनेछन् ।
सो ऐनको मस्यौदामा सरकारले रोजगारीका कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यान्वयनका लागि नियमावली, निर्देशिका बन्ने कार्य ऐन आएपछि मात्रै हुनेछ । यससँगै सरकारले कृषि, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका निकायबाट आवश्यक जनशक्तिको विवरण पनि माग गरेको छ ।
यसबाट प्रोजेक्ट डकुमेण्ट तयार गरी उक्त निकायमार्पmत सञ्चालन हुने राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा ठूलो सङ्ख्याका युवालाई रोजगारीका अवसर जुट्न सक्ने विश्वास राखिएको छ । यो कार्य आगामी कात्तिकसम्म सम्पन्न गरी मङ्सिरदेखि रोजगारी दिने तयारी रहेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए । रोजगारी दिँदा कृषि कार्यको बेमौसमी समय पारेर दिने तयारी भइरहेको छ ।
सरकारले देशमा रहेका उद्योगहरूसँगको सहकार्यमा रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि अघि बढाउने भएको छ । यसअनुरूप सरकारले तालीम दिएका जनशक्ति वा तालीम नदिई पनि परीक्षणकालका रूपमा उद्योगमा काम दिलाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसमा लगाइने जनशक्तिको निश्चित समयावधिसम्मको निर्धारित पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत उद्योगले र ४० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने प्रावधान लागू गरिने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मार्फत ऐनसँग मिल्दोजुल्दो कार्यक्रम अघि बढाएको छ । यसमार्फत यो वर्ष मात्रै प्रतियुवा १ सय दिनको दरले १ लाख रोजगारी सृजना गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ ।
पहिलो चरणमा ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी ‘जब पोर्टल’मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा सृजना हुने रोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने तयारी रहेको छ ।
साथै सोही पोर्टलमा रोजगारी आवश्यकताको तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गर्ने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए । १ सय दिने रोजगार कार्यक्रममा परेका युवालाई सरकारले घण्टाको रू. ६९, दिनको रू. ५ सय १७ र महीनाको रू. १३ हजार ४ सय ५० दरले पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । रोजगारी पाउनु पर्ने सीमामा परेर पनि यदि कसैलाई सरकारले काम दिन सकेन भने तोकिएको पारिश्रमिकको आधा (निर्वाह भत्ता) दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले रू. ३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिसकेको छ ।